Kpido: personas | Martech Zone
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta weebụsaịtị, profaịlụ mmekọrịta, ma ọ bụ ibe ọdịda na-enweghị nghọta ebumnuche nke ọbịa. Ndị njikwa ngwaahịa na-arụ ọrụ ngalaba ahịa ka ha depụta atụmatụ. Ndị isi na-amanye ngalaba azụmaahịa ka ha bipụta nnweta ọhụụ. Ndị otu na-ere ahịa na-arụ ọrụ ngalaba ahịa iji kwalite onyinye na ụzọ na-eduga ndị mmadụ. Ihe ndị ahụ bụ mkpali dị n'ime ka ị na-achọ ịmepụta weebụsaịtị ma ọ bụ ibe ọdịda. Mgbe anyị chepụtara ma mepụta ọnụnọ weebụ maka